Shilalekha » हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको कांग्रेसको दावी,कम्युनिष्ट सरकारको ढाकछोप गम्भीर राष्ट्रघात ! हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको कांग्रेसको दावी,कम्युनिष्ट सरकारको ढाकछोप गम्भीर राष्ट्रघात ! – Shilalekha
हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको कांग्रेसको दावी,कम्युनिष्ट सरकारको ढाकछोप गम्भीर राष्ट्रघात !
२८ आश्विन २०७७, बुधबार १९:०३
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा छिमेकी देश चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जिकिर गरेकाे छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी चीनले गरेको अतिक्रमण एक सार्वभौम राष्ट्र नेपालका लागि गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताएका छन् । ‘झनै आपत्ति, आश्चर्य र निन्दनीय विषय त नेपाल सरकारले गर्न खोजेको ढाकछोप र मौनता साथको राष्ट्रघात छ’